Nibedy an’i Maldiva ireo mpanara-maso ny fahalalahan’ny gazety · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 11 Jolay 2018 4:28 GMT
Nitsikera an'i Maldiva ny Reporters without Borders (RSF) noho ny fanitsakitsahana ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety tamin'ny tatitra 2007 fanao isan-taona.
Naneho ny ahiahiny momba ny fanenjehana ataon'ny fanjakana amin'ireo mpanao gazety miasa ao amin'ny Minivan Daily sy Minivan News ny English PEN.
Nanasokajy an'i Maldiva ho “tsy malalaka” ny tatitra momba ny Fahalalahana Manerantany 2007 avy amin'ny Freedom House ary manasongadina ny olana sedrain'ireo mpanao gazety.
Nitsikera an'i Maldiva ihany koa ny South Asia Press Commission (SAPC) noho ny sakana amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovan-gazety ary nanoritsoritra ny firenena ho fonjan'ny mpanao gazety tamin'ny tatitra 2006 fanao isan-taona .
Will Jordan, mpanao gazety ao amin'ny Minivan News, miresaka momba ny haavon'ny famoretana ao Maldiva ao amin'ny bilaoginy .
Manoloana ny faneriterena goavana iraisam-pirenena, nanamaivana ny famerany amin'ny fepetra kely ny governemanta. Efa-taona lasa izay, henjana be ny herin'ny famaizana satria mpanohitra antserasera efatra no nosamborina noho ny taratasim-baovao antserasera manohitra ary nahazo sazy an-tranomaizina mandrapaha-faty ny telo tamin'izy ireo. Navotsotra kosa ny telo tamin'izy ireo, taorian'ny tabataban'ny iraisam-pirenena, raha nandositra nandritra ny fihazonan'ny polisy ny iray ary nitady fialokalofana tany ivelany. Tsy avela mahazo mpisolovava mihitsy aza ireo gadra.